Bible n'ime otu afọ - Igbo Bible 1988 - Machị 3
1. Nꞌoge ahụ, igwe mmadụ ọzọ zukọrọ. Ebe ha na-enweghị ihe ha ga-eri, Jisọs kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya ka ha bịakwute ya. Mgbe ha bịara, ọ sịrị,
2. “Enwere m ọmiko nꞌebe igwe mmadụ ndị a nọ. Nke a na-eme ya ụbọchị atọ anyị na ha nọ. Ugbu a ọ dịkwaghị ihe fọdụrụ ha ga-eri.
3. Ọ bụrụ na m sị ha laa, ụfọdụ nꞌime ha ga-ada nꞌụzọ nꞌihi agụụ. Nꞌihi na ụfọdụ ha si nꞌebe dị anya bịa.”
4. Ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya, “Ọ̀ pụrụ ime bụ ịchọta nri ga-ezuru ha nꞌọzara a?”
5. Jisọs zara sị ha, “Ogbe beredi ole ka unu nwere?” Ha zara sị ya, “Asaa.”
6. Jisọs nyere iwu ka igwe mmadụ ahụ nọdụ ala. O weere ogbe beredi ahụ kpee ekpere nye Chineke ekele. Ọ nyawara beredi ahụ ntakịrị ntakịrị, nye ya ndị na-eso ụzọ ya ka ha kee ndị mmadụ ahụ nile. Ndị na-eso ụzọ ya kekwara ya.
7. Ha nwekwara azụ ntakịrị. Jisọs weere ya kpee ekpere, nyekwa Chineke ekele. Emesịa ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha kee ya.
8. Igwe mmadụ ahụ riri ihe tutuu ha erijuo afọ. Emesịa, ndị na-eso ụzọ ya tụtụkọtara ibiribe beredi dafuru nꞌebe ndị a nọ rie nri. Ha tụtụjuru nkata asaa.
9. Ndị riri nri a dị puku mmadụ anọ. Emesịa, Jisọs zipụrụ ha ka ha laa.
10. Emesịakwa, Jisọs banyere nꞌụgbọ mmiri ya na ndị na-eso ụzọ ya, gaa nꞌakụkụ obodo Dalmanuta.
11. Mgbe Jisọs ruru nꞌebe ahụ, ndị Farisii bịakwutere ya bido ịjụ ya ajụjụ. Ha gwara Jisọs okwu sị ya, “Ị bụrụ ihe ahụ ị sị na ị bụ, mee ka ihe dị egwu mee na mbara eluigwe. Mgbe ahụ anyị ga-ekwere na ị bụ onye ahụ.”
12. Mgbe Jisọs nụrụ ihe ha chọrọ ka o mee, ọ sụrụ ude nke ukwuu nꞌime onwe ya sị ha, “Gịnị mere ndị ọgbọ a ji na-arịọ m ka m gosi ha ihe ịrịba ama tupu ha ekwere na m? Ka m gwa unu eziokwu, ọ dịghị ihe ịrịba ama a ga-egosi unu.”
13. Ọ hapụrụ ha nꞌebe ahụ banyekwa nꞌụgbọ mmiri ọzọ, ịgafe nꞌofe ọzọ nke osimiri ahụ.
14. Mgbe ha nọ nꞌụgbọ mmiri na-aga, ndị na-eso ụzọ ya chetara na ha chefuru iwere beredi. Ọ bụ nanị otu ogbe beredi fọdụụrụ ha.
15. Mgbe ha nọ na-eche ihe banyere ya, Jisọs sịrị ha, “Ka m dọọ unu aka na ntị, kpacharanụ anya. Unu ekwela ka e jiri ihe na-eko achịcha ndị Farisii na nke ndị otu Herọd duhie unu.”
16. Ndị na-eso ụzọ ya leritara onwe ha anya jụrịtaa onwe ha, “Gịnị ka ọ na-ekwu? Ọ̀ na-ekwu okwu a nꞌihi na anyị ewetaghị nri ga-ezuru anyị?”
17. Mgbe Jisọs ghọtara na okwu ha na nke ya adakọtaghị, ọ gwara ha okwu sị, “Gịnị mere unu ji na-ekwu okwu banyere ejighị beredi? Ọ̀ pụtara na unu adịghị aghọta? Ọ̀ pụtara na obi unu siri ike ịnabata okwu m?
18. Ùnu nwere anya nke na-adịghị ahụ ụzọ? Ùnu nwere ntị nke na-ajụ ịnụ ihe? Ọ̀ ga-abụ na unu echefuola ngwangwa otu a?
19. “Mgbe m ji beredi ise zụọ puku mmadụ ise ibiribe beredi juru nkata ole ka unu tụtụkọtara?” Ha zara sị ya, “Nkata iri na abụọ.”
20. Jisọs jụkwara ajụjụ ọzọ sị ha, “Mgbe m ji ogbe beredi asaa zụọ puku mmadụ anọ, ibiribe beredi juru nkata ole ka unu tụtụkọtara?” Ha zara sị ya, “Nkata asaa.”
21. Mgbe ahụ ọ jụrụ ha sị, “Ọ bụrụ na o si otu a dị, ùnu na-eche na nsogbu m bụ nꞌihi na unu chefuru iweta nri?”